[Puntland] Urur Siyaasi ah oo Baaq u diray Madaxda Puntland [Akhri]
Sunday December 25, 2016 - 18:05:50 in Wararka by Super Admin
Ururka rajo soo celinta Puntland oo ah Urur Siyaasi ah oo Fadhigiisu-yahay Qurbaha wuxuu si adag u canbaaraynayaa Dialka & Shirqoolka lagu hayo Madaxda Amaanka ee Puntland,waxaan u aragnaa dilalkaasi kuwa Qorshaysan oo ay fulinayaan kooxo Nabad d
Ururka rajo soo celinta Puntland oo ah Urur Siyaasi ah oo Fadhigiisu-yahay Qurbaha wuxuu si adag u canbaaraynayaa Dialka & Shirqoolka lagu hayo Madaxda Amaanka ee Puntland,waxaan u aragnaa dilalkaasi kuwa Qorshaysan oo ay fulinayaan kooxo Nabad diid ah oo doonaya inay Gobolka Foodo & Amaan daro ka Abuuraan.
Ururku wuxuu Tacsi marka hore u dirayaa dhamaan Qoysaskii & ehelkii ay ka GeeriyoodeenMasuuliyiin Dilalka si xig-xigay loogu gaystay Magaalada Ganacsi ee Bosaaso, sidoo kale waxaanu Tacsi taasi la mid ah u diraynaa Guud ahaan Shacabka Puntland.
Ururka Rajo soo celinta Puntland wuxuu Gaf, & meel ka dhac weyn, Lumin Masuuliyad daro u arkaa Maqnaanshaha Madaxda Puntland ee ay dalka kaga Maqan-yihiin Mudo Dhowr isbuuc iyada oo Amaankii liicay, waxana uu Ururku soo jeedinayaan in Madaxda Puntland ay Si Deg deg ah u Magcaabaan Guddi isku dhaf ah oo Baadhi Amaan oo Qota dheer ku Sameeyaa Shar-wadayaashii dilay Masuuliyiinta.
Ururka wuxuu doca kale u soo Jeedinayaan Madaxda Puntland ugu Saraysa inay xil adag iska saaraan Sugida & Tayaynta ilaalida Gaarka ah ee Madaxda Gaar ahaan kuwa Amaanka Habeen & Maalin u taagan.
Gaba Gabadii Ururka Siyaasiga ah ee Rajo-Soo celinta Puntland wuxuu soo jeedinayaa Dhowr Tallo ah oo Dhaxal ga ah.
1- In la Magcaabo Guddi deg deg ah oo Saraakiisha Amaanka ka dhex Muuqdaan si dhowna ula socda dilalka & Meesha ay Salka ku hayaan isla markaana Cadaalada la hor keeno si Dhakhso ah kuwii Dilalkaasi soo Maleegay.
2-In Mushahar Dheeraad ah & Gunooyin loo qoro Ilaalooyinka Gaarka ah ee Madaxda Laamaha Amaanka si ay Sahal ugu noqoto inay Shaqo Maalmoodka Gudtaan.
3- In la helo Guddiyo Madax-banaan oo ka Kooban Bulshada qaybaheeda kala Gadisan oo Booliska kala shaqeeya sidii Amaanka layska Kaashan Lahaa.
4- In la tayeeyo War-doonka & Laamaha Nabad-Sugida PL oo ay ka Muuqato Habac-sanaan Baahsan & Tayo La'aan dhanka qalabka & dhaqaalahaba ah.
5- In xil adag layska saaro Masuuliyada Qoysaskii ay ka Geeriyoodeen Madaxdii Qaranku oo ah kuwa Geeriyooday iyaga oo Shacabka u adeegaya.
Afhayeenka Xisbiga Jaamac Feyte